warkii.com » MUSIIBO: Xiddig Uu Muhiimad Gaar Ah Siin Jiray Tababare Frank Lampard Oo Afar Bilood Dhaawac Kaga Maqnaanaya Chelsea
MUSIIBO: Xiddig Uu Muhiimad Gaar Ah Siin Jiray Tababare Frank Lampard Oo Afar Bilood Dhaawac Kaga Maqnaanaya Chelsea
Kooxda Chelsea ayaa heshay war aan u wanaagsanayn dhagaha kooxdeeda kaddib warar soo baxaya oo sheegaya inuu dhaawac gaadhay da’yarka khadka dhexe ee Billy Gilmour kaas oo xilli ciyaareedkan soo galay kooxda koowaad ee Blues.
Gilmour ayaa fursad ka helay tababare Frank Lampard xilli ciyaareedkan iyadoo ay xusid mudan tahay in kulankii ugu dambeeyay ee kooxdaas uu Lampard isaga ka doorbiday xiddiga khibrada leh ee Jorginho.
Laakiin sida uu sheegayo wargeyska The Sun, xiddigan qaybta ka ah xulka da’yarta ee Scotland ayaa u muuqda mid xilli ciyaareedkiisii uu gabi ahaanba soo dhammaaday kaddib dhaawac jilibka ka asiibay.
19 sano jirkan ayaa kulankii Crystal Palace ee dhawaa bedel ku baxay iyadoo ay 10 daqiiqo ka hadhsan yihiin kulankaas waxaana ay u badan tahay inuusan markale Blues meteli doonin xilli ciyaareedkan.
Kooxda uu hoggaaminayo tababare Frank Lampard ayay afar kulan uga hadheen kulamada Premier League iyagoo isha ku haya inay booskooda Champions League ee xilli ciyaareedka dambe xaqiiqsadaan.
Chelsea ayay sidoo kale sugayaan kulan afar dhammaadka FA Cup-ka ah oo ay la yeelan doonaan Manchester United iyo waliba ciyaar 16-ka Champions League ah oo ay booqanayaan Bayern Munich oo lugtii hore ka adkaatay.
Warbixino kala duwan ayay mid kamid ahi sheegaysaa inuu Billy Gilmour maqnaan doono ku dhawaad shanta kulan ee ugu soo horreeya halka ay warar kale xusayaa inuu saddex ilaa afar bilood garoomada ka maqnaan doono.
Gilmour ayaa xilli ciyaareed wanaagsan soo qaadanayay kaddib markii uu Sheffield United kahor tagay kulankiisii ugu horreeyay bishii August, sidoo kale ciyaar FA Cup ah ayuu abaalmarinta xiddiga kulanka ku qaatay Liverpool.